မြတ်လေးငုံ: မြန်မာပြည်က ပြည်သူများအတွက် ပြည်သူ့ ရဲ များဘယ်မှာ အိပ်နေကြပါသလဲ?
မြန်မာပြည်က ပြည်သူများအတွက် ပြည်သူ့ ရဲ များဘယ်မှာ အိပ်နေကြပါသလဲ?
မန္တလေးမြို့ ကားဝယ်ရောင်းလောကတွင် ကားပြင်အလုပ်ရုံ (Work shop) ၌ အပ်ထားသော နံပါတ်မဲ့ ကားများနှင့် နေအိမ်များ၊ ဝင်းခြံများထဲတွင်ရှိသော နံပါတ်မဲ့(Without) ကားများကိုသာ ရွေး၍ ခိုးယူသော လူ ၈ဦးခန့် ပါဝင်သည့် ကားခိုးဂိုဏ်းတစ်ခု ရှိနေကြောင်း မန္တလေးမြို့ ကားပွဲစားလောကမှ သိရသည်။
၎င်းနံပါတ်မဲ့ ကားခိုးဂိုဏ်းသည် နံပါတ်မဲ့ ဘက်စုံသုံးကား(M.P.V) များ၊ မတ်တူး၊ ကာရီနာ၊ ပါဂျဲရိုးကားများကို ခိုးယူ၍ သင့်တော်သော အောက်ဈေးဖြင့် ရောင်းချကြောင်း ပိုင်ရှင်များကလည်း နံပါတ်မဲ့ကား ဖြစ်သဖြင့် ရဲစခန်းသို့ အမှုမဖွင့်ကြကြောင်း ခိုးယူသိရှိပါကလည်း ကားပွဲစားဖြင့် ကျပ်သိန်း ၅၀၊ ကျပ်သိန်း ၇၀ခန့် ပြန်လည် ရွေးယူနေကြောင်း7 Day News ဂျာနယ်တွင် ဖော်ပြထားပါသည်။
Posted by မြတ်လေးငုံ at Saturday, June 11, 2011